HALKAN KA AQRISO W.W MOGTIMES 20-11-2021
Saturday November 20, 2021 - 06:22:47 in Wararka by Mogadishu Times
Wasiirka amniga XFSee xilgaarsiinta C/hi Ma xamed Nuur ayaa ka hadlay howlgaladii ugu da mbeeyay ee Ciidanka amniga DFS gaar ahaan kuwa Booliska ay ka sameeyeen degmooyinka qaar ee Gobolka Banaadir.
Wasiirka amniga ayaa sheegay in howlgaladii ay sameeyeen Ciidanka amniga ay ku soo qabteen boqlaal dhallinyaro oo ay ku jiraan kuwo burcad ah oo dadka dhac u geysan jiray, kana qaaday jiray teleefoonada gacanta iyo waxyaabaha kale ee xiligaas wataan.
Wasiir Cabdullaahi ayaa sidoo kale sheegay in dhalinyarada lasoo qabtay ay ku jiraan Ciyaar weero oo muddooyinkii dambe ay cabasho ka ahaayeen dadka kunool degmooyinka Kaaraan iyo Hiliwaa, isla markaana qaarkood ragga la xi ray, halka kuwo kalena baaritaano kadib lasii daa yay.
Wasiirka amniga oo ka hadlaayay Telefashin ka Qaranka ayaa tilmaamay inay socdaal qorsha yaal badan oo lagu sugayo amniga M/Caasimad da ah ee Muqdisho, lana kordhin doono howlga lada ay wadaan Ciidanka Booliska, si loo xaqii jiyo amniga Magaalada.
Ugu dambeyn Wasiirka amniga Xukuumadda FSMd.C/hi Maxamed Nuur ayaa sheegay in dowl adda ay dhalinyada u sameeyn doonto shaqo ab uur, si aan loogu adeegsan falalka amni darrada ee xiliyada qaarkood dhaca.
Si kastaba Ciidanka Booliska dowladda ayaa habeenadii lasoo dhaafay howlgalo isdaba-joog ah waxaa ay ka sameeynayeen degmooyin ka tirsan G/Banaadir, iyagoona kusoo qabtay boq olaal dhalinyaro iyo waxyaabaha qarxa ah sida Miinooyin iyo Agabyo kale.
Senator Yuusuf Geelle Ugaas oo dadku badi u yaqanaan Dhageey Geelle ayaa ka tagay kur sigii Aqalka Sare ee dhawaan dib loogu doortay.
Warqad uu 15-kii bishan u dir ay madaxweynaha Galmudug, oo aysheegtay in ay heshay Caasim ada Online, ay uu sababta uu kursiga isaga casilay waxaa uu ku sheegay inuu rabo inuu reerkiisa ka dhex sameeyo siyaasad caafimaad qabta.
"Anigoo dareensan mas’uuliyadda iga saaran dalka, gaar ahaan Galmudug oo aan matalo iyo reerka aan kursiga xisaabtooda ku fadhiyay, anigoo raba in bulshadu kuwada qanacdo hab maamulka madaxda Galmudug, anigoo jecel in la daaweeyo dhammaan walaallaha kursigan ka dhaxeeyo, waxaan go’aansaday in aan ka tanaasulo kursigii Aqalka Sare ee dib la iigu doortay 12-kii bishii A
Ingiriiska Oo Taageeray Dowladda Somalia, Kana Horyimid Qorshaha Midowga Afrika
Iyada oo uu socdo qorshe la doonayo in how lgalka Midowga Afrika ee AMISOM looga dhigo mid ay wadajir u maamulaan Qaramada Mid oobay iyo Midowga Afrika ayaa waxaa Arrintaas ka horjeesatay dowladda Ingiriiska.
u fadhisa Qaramada Midoobay Haweeneyda Barbara Woodward ayaa waxaa ay sheegtay in muhiim ay tahay in la taageero sidii loogu gudbi lahaa nidaam amni oo ay dowladda Federaalka Soomaaliya hoggaamiso, isla markaana taage erada caalamiga ee amniga Soomaaliya laga dhigo mid sii jiri kara.
Barbara Woodward oo ka Hadley say Shirkii maalin kahor ay Golaha amniga ka ye esheen Xaaladda Soo maaliya ayaa sheegtay inay Aragtidee da tahay in ha bka dhinacyada badan leh ee Midowga Afrika iyo QM ay soo jeediyeen aysan guuleysan doonin.
Waxay ay intaas kusii dartay Barbara in qor shayaasha Midowga Afrika uu ka soo horjeedo in mas’uuliyadda amniga dalka si buuxda loogu wa reejiyo dowladda Soomaaliya, iyadoo tilmaamtay in heshiis lala gaaro Midowga Afrika iyo QM, iy adoo la tashanaya DFS ay ka dhigan tahay in laga gudbo is faham waaga haatan jira.
Si kastaba Midowga Afrika ayaa waxaa uu dhowaan ansixiyey qorshe hawlgalka AMISOM ka dhigaya mid ay wadajir u maamulaan Q/Mid oobay iyo M/Afrika, waxaana Arrintaas siweyn isugu khilaafay DFS iyo Midowga Afrika.ugust ee sanadkan, si aan tolkeyga dhexdiisa uga abuuro jawi siyaasadeed oo caafimaad baba,” ayuu Senator dhagey ku yiri qoraalka uu isku casilay.
"Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, guddoonka baarlamanka Galmudug iyo dhammaan xildhiba annada waxaan idinka rajeynaya in aad aqbali doontaan is-casilaadeyda iyo inaad dib ugu laa ban doontan reerkii kursigan xisaabta u lahaa si loo helo xubintii buuxin laheyd booskan,” ayuu sii raaciyey.
Sida ay xog ku heshay Caasimada Online, Dhagey ayaa la filayaa inuu u tartamo Aqalka Hoose, waxaana la filayaa inuu kamid noqdo shanta xubin ee uu Shalay ku dhawaaqayo guddiga doorashada Galmudug.
Halkaan hoose ka akhriso waraaqda uu isku casilay oo ay nuqul kamida heshay Caasimadda Online
Midowga Musharaxiinta "Ma oggolaan doo nno in la boobo doorashada G/Shacabka..”
Golaha Midowga Musharraxiinta ayaa walaac xoog leh ka muujiyay dib u dhaca isdaba-joogga ah, daahfurnaan la’aanta iyo daaha ula kaca ah ee doorashooyinka.Golohu wuxuu dadaal xoog gan ku bixiyey in uusan muddo kororsi dalka ka hirgelin, wuxuuna weli u tag anyahay in uu hor istaago muddo kororsi dadban iyo doorasho boob ah, taasoo baalmarsan dastuurka dal ka, caddaalada iyo habraacyada doorasho
Xaaladda uu Shalay dalkeenna ku suganya hay ma aha mid xamili karta doorasho loo daa hiyo dano gurracan ama la boobo, sababtoo ah daaha doorashada ama boobka doorasho waxey dalka u horseedaysaa xaalad cakirnaan iyo cola ad sokeeye.
Goluhu wuxuu ku boorinaayay R/wasaare Maxamed Xuseen Rooble in uu dalka ku hoggaa miyo sida dastuurka waafaqsan oo ay dalka ka qabsoomaan doorasho xor iyo xalaal ah, daahfu rnaan leh, waqtigooduna cayimanyahay.
RW waa inuu tixgeliyay kalsoonidii ay shacabka Soomaaliyeed iyo saamileyda iyaasadeed siiyeen, masuuliyadiisana uu si dhab ah uga soo dhalaalo.
1- In la helo jadwal doorasho oo mideysan oo ay ku caddahay taariikhda billawga doorashada xubnaha Golaha Shacabka iyo dhammaadkee da.
2- In ay doorashu noqoto mid si daahfurnaan leh ku dhacda, loona madaxbanneeyo odayaa sha dhaqanka beesha kursiga ku astaysan soo xulista ergada, fursad simanna loo siiyo tartamay aasha oo idil, goobta doorashadu ka dhacaysana loo sinnaado.
3- Madaxda Dowlad Goboleedyadu waxay awood u lahaayeen magacaabista kuraasta Aqa lka Sare. Shacabka Soomaaliyeed iyo beesha ca alamkaba waxay marag ka ahaayeen sidii loogu takrifalay doorashadii Aqalka Sare marka laga reebo meelo kooban.
4- Goluhu wuxuu ka dhigayaa cawaaqib xum ida ka dhalan karta in la boobo doorashada kur aasta Golaha Shacabka. Dalkeenu wuxuu ka soo kabanayaa colaad sokeeye, doorasho la boob ana natiijadeedu waa colaad sokeeye, sidaas dar teed waa in aan si wadajir ah uga hortagnaa bo obka doorashada.
5-In la helo korjoogto ka socota bulshada ray idka ah iyo beesha caalamka, si loo hubiyo hufn aanta doorashada.
6- Goluhu ma aqbali doono doorasho aan jad walkeedu caddeyn oo maalinba kuraas tiro yar la shaacinayo.Wuxuu kaloo aqbali doonin doorasho la boobo, lagu shubto oo beelihii xaqa u lahaa ku rsiga la dulsaaro dad aysan iyagu soo dooranin.
Golaha ammaanka oo magacaabaya guddi soo qiimeeya in Soomaaliya laga qaado cun aqabataynta hubka ee saaran
Golaha ammaanka ayaa dhowaan magacaa baya guddi madax bannaan oo soo qiimeeya waxa ay dowladda Soomaaliya ka qabatay hub ka sharci darrada ah, si looga fikiro in laga qa addo cunaqabataynta hubka ee saaran.
Danjiraha Soomaaaliya u fadhiya Q/Midoobay, Abuukar Baalle, ayaa warkaan ku sheegay ware ysi uu bixiyay oo uu kaga hadlayay sababta So omaaliya muddo ka badan 30 sano ugu guulay san la’dahay in laga qaado xayiraada hubka ee hadda lasii kordhiyay.
Danjiruhu wuxuu sheegay in guddigan oo la magacaabayo bi laha soo socda ay tegidoonaan M/Muqsdisho, iyagoo u kuur ga lidoona heerka la dagaalanka hubka sharci darrada ah ee dalka Soomaaliya lasoo galiyo.
"Waa guul u soo hoyatay Soomaaliya guddig aas qiimaynta haddii la diro, kadibna la diyaariyo yoolashii Soomaaliya looga qaadi lahaa xayira ada hubka oo ah tii ugu dheerayd ee dal lagusoo rogo,” ayuu yiri Danjire Abuukar Baalle.
Danjiraha UNka ayaa sheegay in Soomaaliya markii ugu horraysay ay ku guulaysatay in ay la socoto oo wax laga weydiiyo hubka ciiddamada AMISOM loo keeno, isagoo sheegay in dowladda la siinayo number sireedka hubkaas, si ay u oga ato haddii hubkaas cid kale gacanta loo galiyo.
Maalmo kahor ayay ahayd markii golaha amm aanka uu meel mariyay in muddo hal sano ah lagu kordhiyo cunaqataynta hubka ee Soomaali ya, iyadoo golaha ammaanku sheegay in Alsha baab ay si fudud gacanta ugu galaan hubka aan la ogayn meel uu kaga yimaado.
Hay’adda ICG oo Soomaaliya kasoo saar tay DIGNIIN ku saabsan ciidanka Amisom
Hay’adda caalamiga ah ee xasaradaha addu unka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICG ayaa digniin culus kasoo saartay in Ciidamada AMI SOM laga saaro gudaha Soomaaliya iyadoo aan la heyn ciddii Amniga kala wareegi laheyd
Hey’adda ayaa sheegtay Inay walaac xoog leh ka qa bto hubanti la’aanta ka jirto mustaqbalka ciidamada AM ISOM maadaama waqtiga howlgalkaan uu ku eg yahay 31-ka December 2021.
ICG ayaa xustay in kooxda Al-Shabaab ay du rba la wareegi doonto guud ahaan Soomaaliya haddii ay ciidamada AMISOM isaga baxaan Soo maaliya, waxayna ku baaqday in laga fiirsado tal laabadaas oo ay sheegtay inay saameyn ku yee lan doonto Soomaaliya iyo guud ahaan Qaarad da Africa.
Hey’adda waxay sheegtay in Deeq-bixiyayaa sha taageera AMISOM ay rabaan dib-u-habayn iyo in la dhimo tirada ciiddamada, halka AU iyo dawladdaha ciidamada ku deeqay ay raadinay aan maaliyad la isku halayn karo iyo in howlgalka lasii ballaariyo.
"AMISOM waxay lama huraan u tahay ilaalinta cabbirka xasilloonida Soomaaliya. Ka bixitaank eeda degdega ah waxa ay dhiirigelinaysaa kac doonka Al-Shabaab, waxaana laga yaabaa in dalka uu galo fowdo. Laakiin deeq-bixiyayaashu na waxay ka caga jiidayaan hawl-gal aan hour mar yar ka samayn dagaalka ka dhan ka ah xa gjirnimada ee ka socda Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay ICG.
Hey’adda ayaa ku talisay in illaa lix bil oo dhe eri ah loogu daro howlgalka Midowga Africa ee AMISOM si saaxiibada AMISOM ay waqtigaas ku diyaariyaan qorsho dib u habeyn ah oo socon doono muddo 5 sano ah.
Waxay sheegtay inay lagama maarmaan tah ay in howlgalka AMISOM dhaqaale looga raadiyo Q/Midoobay, M/Africa iyo dhinacyada kale ee ka qeyb qaadan karo sii socosashada howlgalka AMISOM.
Howlgalka M/Africa ee AMISOM ayaa Soo maaliya ka socday ku dhawaad 15 sano illaa ha ddana laguma guuleysan ujeedadii loo bilaabay oo aheyd in laga adkaado kooxda Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo guul ku tilmaam tay in golaha ammaanku ku taageeray mow ifkee da ku aadan howlgalka AMISOMl
Dowladda Soomaaliya ayaa guul ku tilmaamt ay in dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka ay ku taageereen mowqifkeeda ku aadan diidmada qorshaha midowga Afrika uu ku doonayo in loo
beddelo howlgalka AMISOM.
Wasiirka arrimaha dibbada Soomaaliya, Max amed Cabdirisaaq Maxamuud, ayaa sheegay in golaha ammaanku uu soo saarayo qoraal uu ku sheegayo in qorshaha midowga Afrika uu yahay mid ka soo horjeedo in Somaaliya lagu wa reejiyo ammaanka dalkeeda .
Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay rabto in howlgalka AMISOM uu ku ekaado la dagaalanka cadowga dowladda iyo in la dhiso tayada ciiddanka Soomaaliya, laguna wareejiyo masuuliyadda ay AMISOM haatan gac anta ku hayso.
"Waxaa farxad aad u weyn noo ah, in dowla dihii ku jiray golaha ammaanka ay kulligood caa lamad aad u fiican ka bixiyeen in annaga doodde enii ay qaateen, oo tii midowga Afrika aan la qa adan,” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibbada So omaaliya.Wasiirku wuxuu sheegay, in DFS ay ka go’an ta hay in iyada looga dambeeyo qorshaha amnigee da isla markaana aysan qaadan qorshe dusha lo oga keenay oo lagu dul maamulo, wax tal ahna aysan ku lahayn.
Dilalka Qorsheysan Oo Ku Sii Kordhaya Caas imada Dalka Ee Muqdisho
Waxaa Shalay lagu diley M/Muqdisho mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool degmad Deyniile iyadoo ay tahay nabadoonkii 2aad ee muddo shan cisho gudaheed ah lagu dilo caa simada dalka ee Muqdisho.
Marxuum Cabdi Gaabow Cali Jimcaale ayaa rasaas lagu furay xili uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla deegaanka Gubta ee degmada Dayniile.
Sida caadig ah waxaa tegey goobta dilka uu ka dhacay ciidamada Booliska iyagoo halkaas baaritaan ka sameeyay xilli ay ka baxsadeen dad kii geystey dilka nabadoonka,
Xaafada Jungal ee degmada Yaaqshiid ayaa lagu dilay nabadoon kale 7baadkan, iyadoo si doo kale degmada Dharkaynley lagu dilay hab een hore ganacsade.
Hase yeeshee ciidamada ammaanka ayaa habeenadii howlgalo ka sameeyo degmooyinka M/Muqdisho iyadoo taasina aysan waxba ka be delin dilalka loo geysanayo dadka rayidka
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer Fed eraal ayaa bogaadinayay guddiyada doorashooy inka Somaliland iyo Galmudug oo bilaabay Do orashada kuraasta Golaha Shacabka waqtigii loogu tala galay.
War-saxaafadeed kasoo baxay Guddiga door ashooyinka ayaa waxaa maamul Goboleedyada Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hir shabeelle loogu baaqay inay dardar-geliyaan bilaabida doorashada G/Shacabka.
Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in doora shada G/Shacabka la dedejiyo, isla markaana do orashada lagu dhammeeyo waqtigii loo qabtay oo aheyd 24 bisha soo socota ee December 2021.
Waxaa kaloo Guddiga ay Guddiga doorashoo yinka ku dhiirigeliyeen in sida heshiiskii doorasha da ku caddeyd la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30%, ayna soo saaran Liiska kuraasta loo aste eyay haweenka.
Ugu dambeyntii Guddiga hirgelinta doorashoo yinka heer Federaal ayaa u mahadceliyay Bulsha da Soomaaliyeed, Beesha Caalamka iyo cid kas ta oo gacan ka geysaneysa inay dhaqaaqdo doorashada..
Hoos ka Akhriso War-saxaafadeedka ay soo saareen Guddiga doorashooyinka
Galmudug oo gudbisay shanta kursi ee ugu horeysa Golaha Shacabka
Guddiga Doorashada Galmudug ayaa Shalay shaaciyay shanta kursi ee ugu horeysa ee Doora shada Xildhibaanada Golaha Shacabka, kuwo oda ay deegaan doorashadoodu tahay Galmu dug.Guddiga Doorashada ayaa sheegay inay guda gelayaan diiwaangelinta oday aasha, ergada iyo bulshada rayid ka, doorashada kuraa staana ay qa ban doonaan maalm aha soo soc da. Afhayeenka Gudd iga Hirgelinta Doorashooy inka He er Federaal, Axmed Aadan Safiina ayaa sheegay in Galmudug ay tahay maamulkii ugu horeeyay ee bilaaba qabashada Doorasha da Golaha Shacabka.
R/Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa Habeen hore D/Goboleedyada kale ugu baaqay in si dha khsa ah ay ku bilaabaan Doorasha da Golaha Shacabka.
Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo shaaciyay 11 kursi oo ka mid ah golaha Shacabka
Guddiga doorashooyinka Koofur galbeed ayaa shaaciyay 11 kursi oo ka mid ah xildhibaanada G/Shacabka ee ka imaanaya maamulkaas.
Kuraasta ugu horeysa ee laga soo saaray koo nfur -Galbeed, Waxaa ugu horeeya.
Gudoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Mursal.
Gudoomiyihii hore ee Golaha shaca bka Jawaari.
Gudoomiyihii hore ee G/shacabka Aadan Mad oobe. Xildhibaan Hani Mohamed Aadan iyo Idiris Dhokhtor.
Midowga Afrika Iyo Mareykanka Oo Dalba day Soo Nooleynta Xabbad-Joojinta Itoobiya
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ayaa la kulmay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya maalintii Khamiista, si ay u soo nooleeyaan wadahadalladii xabbad-joojinta ahaa, iyada oo dowladdu oggolaatay in 369 baabuur oo gargaar ah ay galaan gobolka Tigray ee ay abaaruhu ku dhufteen.
Jeffrey Feltman iyo Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka Midowga Afrika ee Geeska Afrika ayaa Khamiistii gaaray dalka Itoobiya, waxaana labada ergey ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka wada ee Tigreega iyo xulafadooda ay ku dhawaaqaan xabbad- joojin shuruud la’aan ah, ayna oggolaadaan in gargaar bini’aadantinimo la gaarsiiyo deegaannada Waqooyiga Itoobiya ee ay dagaaladu saameeyeen.
Feltman ayaa markii dambe la kulmay Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka ahna wasiirka arrimaha diba dda Demeke Mekonnen.
Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay maamula an Lalibela iyo Kombolcha oo ka tirsan dhulka Axm aarada, sidoo kale waxay u dhaqaaqeen qaybo ka mid ah gobolka Canfarta.
Ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa la rumeysan yahay inay ku nool yihiin xaalad macaluul ah gobo lka Tigray, halkaas oo Q/M ay Khamiistii sheegtay inay awoodi waysay inay cunto geyso mudo bil ah.
Xog: Axmed Madoobe oo si rasmi ah u xaqiij iyey damaca iyo qorshaha Saciid Deni
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Isl aam ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey damaca madax weynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ee ah inuu isku sharxo xilka madaxweynaha Soomaaliya, sida laga soo xigtay xubno uu la hadlay.
Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa Habeen hore ku lan deg deg ah la qaatay Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoonka baarlamanka Puntland, kulankaas oo qorshaha Deni lagu shaaciyey
Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Isla am oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in Madaxweyne, Siciid Deni uu yahay Musharrax u tart amaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya, islamarka ana u baahan in la garab Istaago.
Axmed Madoobe waxa uu shee gay in Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoonka Baarlamanka loo gu yeeray in ay taageeraan Mu sharraxnimada Madaxweyne Si ciid Deni, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ka tirsan Madaxtooyada oo diiday in magacyadooda la xigto iyo qaar ka mid ah xubnihii ka qeyb galay kulanka.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in Puntl and iyo Jubaland ay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabayaan Doorashada Golaha Shacabka, balse wax faahfaahin ah ma raacin.
Dhinaca kale, Madaxweyne ku xigeenka iyo Gud doonka Baarlamanka, ayaa soo dhoweeyay qorsha ha Musharraxnimada Madaxweyne Siciid C/hi Deni, waxaana ay u ballan-qaadeen taageero buuxda.
Madaxweyne Siciid Deni kama hadin wax ku saabs an Musharraxnimadiisa balse wuxu sheegay in ku lanku xiranyahay habeenka Jimcuhu soo galayana (Xalay) ay jirto Casha Sharaf lagu sagootinayo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Hoggaamiyaha maamulka Puntland waxa uu bi sha January ee sanadka soo socdo u dabaal dagi doonaa 3 sano guurada kasoo wareegtay madaxtini madiisa Puntland, waxaana markaas xafiiska uga harsan laba sano.
Doorashada heer Federaal waa dhaafi doontaa xilliga uu Deni xusayo saddex guuradiisa, wuxuuna ka mid yahay ragga xilligaan soo gaarsiiyey doora shada heer Federaal. Waxaa lagu eedeeyaa inuu dhowr xaaladood isku aadinayey.
Saciid Deni waa musharax madaxweyne oo he er Federaal ah, dhowr bilood ka hor si qarsoodi ah ayaa loo dhihi jiray kalmadaas, laakiin muddooyinkii la soo dhaafay si toos ah ayuu u bilaabay ololihiisa, wuxuuna soo saartay xildhibaano.
Saciid Deni wuxuu ku doodaa haddii uusan tarta min inuu kursiga mar kale kusoo noqon doono mad axweynaha hadda talada ka dhammaatay ee Max amed C/hi Farmaajo, taasoo ka dhigan inuu isku ar ko ninka qura ee Farmaajo ka hor istaagi kara kursiga.
Mdaxweyne Deni Oo Isbedel Ku Sameeyay Dha mmaan Hoggaamada Booliska Punt land
Madaxweynaha DG/Puntland Saciid C/hi Deni ayaa Isbedel ku sameeyay dhammaan hoggaama da kala duwan ee Ciidanka Boolis ka Maamulka Puntland, kadib wareegto kasoo bax day Xafiiskiisa. Madaxweyne Deni ayaa magacaab ay Taliyeyaasha Nabadgalyada Wadooyinka, Hoga anka Hawlaha, Maaliyada iyo Saadka Booliska, baa rista Danbiyada (CID) iyo Kaaliyaha Xafiiska Tali yaha Ciidanka Booliska.
Hoos ka Akhriso Magacyada hoggaamada Ciidanka Booliska ee la magacaabay. 1-G/Sare Cabdiqani Saciid Saleeban waxaa loo magacaabay Taliyaha Qaybta Nabadgalyada Wad dooyinka ee Ciidanka Booliska.
2: G/sare Maxamuud Faarax Maxamed waxaa loo magacaabay hogaanka Hawlaha ee Ciidanka Booli ska.
3:G/sare Cabdi Yuusuf Muuse loo magacaabay Jubbaland Oo Faah Faahin Ka Bixisay Dab Ay Ku Dhinteen Hooyo Iyo Carruurteeda
Taliska Booliska Maamulka Jubbaland ayaa faah faahin ka bixiyay Dab geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo Shalay ka kacay Guri ku yaalla deegaanka Goobwayn oo hoostega Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee Jubbaland.
Dabka kacay ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay koronto ku jirtay Guriga, waxaana wararka ay intaas kusii darayaan in Guriga uu yaallay Shidaal ku jiray fuustooyin, isla markaana uu lahaa Nin Ganacsade ah.ogaanka Maaliyada iyo Saadka Booliska.
4: G/Sare Axmed Cabdi Nuur loo magacaabay Taliye ku xigeenka Hogaanka Saadka iyo Maali yada Ciidanka Booliska.
5: G/sare Maxamed Cabdi Axmed loo magaca abay Hogaanka Tababarada Ciidanka Booliska Puntland 6: G/sare Ayaan Cabdulle Qarbe loo m agacaa bay Hogaanka xirirka Dadwaynaha iyo Xuq uuqul inslaan Ciidanka Booliska
7: G/sare Aadan Axmed Cali loo magacaabay Taliye ku xigeenka 1aad ee Hogaanka baarista Dan biyada (CID) Ciidanka Booliska
8: G/sare Abshir Xuseen Siciid loo magacaabay Taliye ku xigeenka 2aad Hogaanka Baarista Danbiy ada (CID) Ciidanka Booliska.
9: G/dhexe Cabdifataax Cabdulqaadir Axmed loo magacaabay Hogaanka Ciidanka Booliska
10: G/sare Axmed Cabdi Sugulle waxaa loo maga caabay Kaaliyaha Xafiiska Taliyaha C/Booliska.
Shir looga hadlayey doorashooyinka dalka, gaar ahaan xaqiijinta qoondada Haweenka ee G/ Shacab ka ayaa Dorraad lagu soo geba-gebeeeyey M/Muq disho, kaasi oo looga hadlay kuraasta G/Waqooyi iyo kuwa Banaadir iga oo yaalla caasimada.
Kulanka oo ay kasoo qeyb-galeen haween is ku gu jira musharaxiin kuraasta baarlamaanka, xildhib aano ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad iyo xubno ka socday Wasaaradda haweenka Soomaaliya.
Shirka ayaa laga soo saaray digniin ku aadan in haweenka la duudsiiyo kuraasta G/Shacabka, aya ga oo sheegay in 9 Kursi oo ah kuwa G/Waqooyi, is lamarkaana dhawaan la shaaciyey ay ku jiraan labo kursi oo mad-madow badan ku gadaaman yahay.
"Waxaa Sagaalkaas ku jira afar gabdhood, labo ka mid ah sagaalkaas koontada ayey ku xaqiijisan yihiin oo wax muran ah kama jiro laakiin labadii kale weeyi, waxaa leenahay koontada ay ku fadhiyaan gabdhaha ha ku tartamaan gabdhaha Somaaliyed.”
"Haweenka ayaa ilaalin kara qoondada oo Nin ma ilaalin ka ro,” ayey sidoo kale tiri haween ka mid ah mas’uuliyiinta iskugu yimid shirkaan oo lagu eegayay xaqiijinta qoondada Haweenka 30%.
Waxay sheegen in doorashadii Aqalka Sare ay u dhacday si wanaagsan, islamarkaana uusan jirin xad-gudub ka dhan ah qoondada Haweenka, islam arkaana loo baahan yahay in doorashada Golaha Shacabka la doodsiin koontadooda.
Heshiiskii doorashada ee ay hore u gaareen ma daxda sarre ee dalka iyo kuwa dowlad goboleedya da ayaa qeyb ka ahaa ilaalinta qoondada oo mar kale looga arrinsanayey magaalada Muqdisho.
Faah Faahin:-Dad Ku Dhintay Qarax Xoog gan Oo Shalay Ka Dhacay Suuq Ku Yaal Bardaale
Inta la xaqiijiyay afar qof oo shacab ahaa ayaa ku geeriyooday, halka 10 qof kalena waa ay ku dha awacmeen, kadib qarax xoogan oo duhurnimadii Shalay ka dhacay gudaha degmada Bardaale ee Gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Qaar kamid ah Dad ka agdha waa goobta ayaa wa xaa ay ku warrameen in Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ee laga ha go meelaha fog-fog uu ka dhacay Suuqa degmada Bardaale oo ay ku sugnaayeen dad reer miyi ah.
Suuqa uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ku yaa lla dukaaman maalmaha jimcaha ay dadka reer miy iga aad uga adeegtaan, iyaga oo ka yimaada dega ano ka fog degmada, waxaana sidoo kale qeyb yar oo suuqa ka tirsan oo lagu iibiyaa Jaadka.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Dhowr qof oo kamid ah 10-ka ruux ee dhaawacya da kasoo gaareen qaraxaas ay xaaladdooda Caa fimaad liidato, waxaana la geeyay Isbitaalka Maga alada, si loogu dabiibo. Maamulka degmada Barda ale ee G/Baay ee Maamulka K/Galbeed ayaan weli hadlin qaraxa sababay dhima shada iyo dhaawac ee Shalay ka dhacay gudaha degmadaas, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas’uuliyaddiisa.
Tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhibaatay sanaa dalka Libya oo ugu dambeyn dib ugu soo laabtay Soomaaliya
Ugu yaraan 10 qof oo ahaa Tahriibayaal Soo maali ah oo ku dhibaataysanaa xabsiyada Libya ay aa ugu dambeyntii dib ugu soo laabtay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Wasiirka amniga Soomaaliya, Cabdullaahi Max amed Nuur oo dhallinyaradan kusoo dhoweeyay ga roonka Aadan Cadde, ayaa sheegay, in ay heli do onaan fursado ka wanaagsan midda ay dalka uga tahriibeen ee dhibka iyo rafaadka u horseeday.
Hay’adda socdaalka adduunka ee IOM oo gacan ka geysatay soo celinta dhallinyaradan ayaa sheeg tay in Midowga Yurub uu maalgalinayo barnaamijyo dhallinta kasoo laabatay tahriibka looga caawiyo in ay dib u bilaabaan noloshooda.
anadihii ugu dambeeyay, tahriibka ayaa hoos u dhacay, kadib markii ay badatay dhibaatada xabsiy ada Libya loogu geysanayo muwaadiniinta Soomaal iya ee dalkooda uga haajiray si ay nolol wacan wad amada Yurub uga helaan.
Wareysi: Wasiirka A/dibadda oo wax laga weydii yey dhallinyaradii la geeyey Eritrea iyo dagaalka Ethiopia
Wasiirka Arimaha dibadda Soomaaliya Ma xamed Cabdirisaaq Maxamuud oo wareysi siiyey TV-ga Dalsan ay aa ka hadlay arr imo dhowr ah oo badankood ku saa bsan xaalada ha ar rimaha diba dda ee siyaasadda Soomaaliya, oo dad badan ay qa baan inay ku jirto xiliyadii ugu adkaa. Arrimaha wax laga weydii yey wasiirka waxaa ka mid ah, ceyrinta ku xig eenkii ergayga M/Afrika ee Soo maaliya , qorsha ha ka bixitaan ka AMISOM ee Soomaaliya, wa da hadallada Al-Shabaab iyo dawladda Somaliya, dhalinyaradii tababarka lo ogu qaaday dalka Eritrea, xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Itoobiya iyo sa ameynta go’aanada wasiir Maxamed Cabdirisaaq uu ku leeyahay da lka Mareykanka oo dhalasho lab aad uu ka hey sto.
Ugu horeyn wasiirka ayaa ku celiyey in ku xi geen kii la ceyriyey ee wakiilka Midowga Afrika ee Soom aaliya Simon Mulongo ay ku saxneyd dowladda So omaaliya go’aankii ay ku ceyrisay, hase yeeshee wasiir Maxamed Cabdirisaaq wax uu aad uga gaabs aday inuu faahfaahiyo dembiy ada uu dalka ka galay ergaygaas la ceyriyey.
Mar wax laga weydiiyey xaaladda cakiran ee dal ka Itoobiya waxuu sheegay in dhibaatadii ka dhac da dalkaas ay wada saameyn doonto guud ahaan wadamada Geeska Afrika, isagoo u raje eyey in aysan meesha ka bixin kala dambeynta iyo dowlad nimada Itoobiya.
Sidoo kale wasiirka waxaa la weydiiyey halka ay ku dambeeyeen dhalinyaradii tababarka loo geeyey wadanka Eritrea, balse waxa uu ku dood ay in arri maha ciidanka ay u xil-saaran tahay wa saaradda gaashaandhigga, sidaas darteedna arrinta dhalinya radaas aysan khuseyn wasaara da arrimaha dibada.
Wasiir Wasiirka ayaa la weydiiyey sida uu isu gu keeni karo u daacad noqoshada danaha Soo maal iya iyo Mareykanka oo labadaba uu dhala sho ka ge ysto, waxuuna ku dooday in danaha Soomaaliya iyo Mareykanka aysan is diidaneyn, sidaas darteed uu diyaar u yahay ilaalinta danta qaranka ee uu u dhaar tay.
M/Berbera oo ku guulaysatay abaalmarin qaali ah
Dowlada Hoose ee degmada Berbera ee So maliland, ayaa ku guulaysatay abaalmarinta Chi ld friendly Cities and Local gov ernme nts Inspire Award, oo ay hay'a dda caruurta ee UNICEF siiso magaalooyinka ku habo on in car uurtu si qurux badan ugu noolaan kar aan.
Magaalada Berbera oo abaalmarinta kaga gu ul aysatay magaalooyinkii la tar tamayay oo ku kala yaala Afrika iyo Aasiya, ayay UNICEF ku sheegtay inay ku mutaysatay taageero xoogan oo ay dowlada hoose ee Berbera siiso waxbar ashada, waxaana 38% kor u kacay ardayda dugs iyada is qorta intii u dhaxaysay sannadihii 2014 ilaa 2020.
Waxa ay hay'addu sheegtay in dowlada hoose ee Berbera ay taageerto ilaa 10,000 oo arday oo 46 % ay hablo yihiin, kuwaasi oo wax ka barta 47 du gsi. Taageerada ay dowlada hoose waxbar ash ada siiyay ayaa waxa kamid ah balaadhinta dugsiyada, dib u dayactirka, mushaarka macalim iinta oo ay bix iso, qalabaynta dugsiyada, bixinta kharashka koro nto iyo biyo joogto ah. Hay'ada ayaa, sidoo kale sheegtay in dowlada hoose ee Berbera ay gacan wayn ka gaysatay ya gleelida nidaam caafimaad oo tayo leh.
"Guulaha ugu waa wayni waxa weeyaan in dhaqaalaha ugu dhaw ee degmada iyadoon me el kale looga doonayn in isla degmadii lagaga shaqeeyo, guulaha ugu waa wayn ee aanu taa ban karno wax aa kamid ah in waxbarashadii iyo caafimaad kiiba heleen adeegyo iyo dhaqaale aa nay awal degmada ka heli jirin" wax sida yidhi du qa Berbera, Cabdisha kuur Muxumed Xasan (Ciddin).
Dowladda Hoose ee Degmada Berbera ayaa aad la gu amaana, wax ka qabashada kaabayaa sha dhaqaalaha, dib u dhiska waddooyinka iyo horumar inta waxbarashada iyo caafimaadka degmada
Cabdiraxmaan Cirro "Kalsooni buuxda ay aan ku qabaa in doorashada madaxtooya du ku dhi ci doonto wakhtigeeda"
Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaa radka Somaliland ee Waddani Cabdiraxmaan Ma xamed Cabdillaahi Cirro, ayaa sheegay in uu kal sooni buuxda ku qabo in madaxweyne Muuse Bii xi doora shada madaxtooyada wakhtigeeda ku qaban doo no. "Kalsooni buuxda ayaanu ku qa bnaa, nooma na muuqato sa bab loo kordhiyo, sab abtu wa xa weeyaan dadkii cod aynay ay 80% ama ka badani way di waan ga shanyihiin" ayuu yidhi Cirro.
"Guddiga doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen in ay doorashadii iyo howsheedii wa daan, madaxweynaha waxay la kulmeen bi shii 8aad wuxu amray in ay soo diyaariyaan kha rashkii iyo habraacii, wax kale oo ka dhiman oo imika aanu is leenahay waa qabyo ma jirto".
Cirro ayaa sheegay in doorashooyinkii hore sa babihii dib loogu dhigi jiray ay ugu waynayd co dbixiy ayaasha oo aan diwaan gashanayn, waxa anu shee gay in Shalay codbixiyayaasha badan koodu diwa an gashan yihiin, isla markaana anay howl badan yeelan doonin in inta hadhayna la diwaan galiyo doorashadana la qabto.
Cirro ayaa warkan ka sheegay waraysi uu mag aalada Hargaysa ku siiyay wariye Cabdirisa aq Xaaji Catoosh.
Markab jariif ah oo Shiinaha laga leeyahay oo la gu qabtay xeebaha Galmudug oo lasii daayay
Markab laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu qabtay isagoo kalluumaysi sharci darro ah ka wa day xeebaha Galmudug, ayaa lasii daayay, iya doo aan sharciga la horgeynin.
Urur lagu magacaabo Somalia Marine Fisher ies oo si dhow ula socda kalluumaysiga sharci darrada ah ee xee baha Soomaali ya, ayaa sheegay inuu soo gudbin doono baaritaanka hor u dhac ah oo ay ku sameeye en sababta lagusii da ayay markabka, isagoo aan sharciga la marsiin.
Maraakiibta Kalluumeysiga dalka Shiinaha ayaa si xad dhaaf ah uga kalluumeysanaya bad da Soom aaliya, waxaana loo sababeynayaa he shiis wasaa radda kalluumaysigu sannadkii 2018 la gashay Ururka Kalluumeysiga Dibadda ee dal ka Shiinaha oo loo gaabiyo COFA.
Somalia Marine Fisheries waxay ku talisay si loo dhimo kalluumeysiga xad-dhaafka ah ee maraak iibta Shiinuhu ka wadaan badda Soomaa liya in la baabi’iyo Is-fahamka COFA.
Sarkaal katirsan Ciidanka Uganda ayaa Warb aahinta u sheegay in Hay’adaha ammaanka ay toogteen Sheekh Maxamed Cabaas Kirevu oo ay ku ee deeyeen in uu xiriir la lee yahay kooxda Daacish ee sheegatay mas ’uuliyadda qaraxyo ka dhacay Kam pa la.
Toogashada Sheekha ayaa ka dha cday meel ka baxsan Magaalada Kampala oo ah halka qarax yadu ay ka dhaceen, Ciidanka ayaa ho wlgalk aan oo ah mid qorsheysan ku tagay goobta uu jo ogay oo aanay faah-faahin ka bixin Hay’adaha ammaanka.
Weerarada qaraxyada ah ee ka dhacay Kam pala ayaa galaaftay nolosha dad ku dhaw 10 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 30 kale sida ay sheeg een Hay’adaha Caafimaadka & Laamaha ammaanka Uganda oo faah-faahin ka bixiyay qaraxy adaas.
Jabhadda Islaamiga ah ee ADF waxaa Uga nda la gu aasaasay sagaashamaadkii balse had da waxaa saldhig u ah Jamhuuriyadda Dimuqraa diga ah ee Congo. Tan iyo markii ay wacad ku mareen inay daacad u yihiin ururka IS sanadka markuu ahaa 2019, ayaa waxa ay qaadeen we rarro isdaba joog ah.
21 qof ayaa la xiray ka dib tan iyo weerarkii Talaadadii gilgilay caasimadda Uganda, iyadoo boo liiska ay wacad ku mareen inay burburin doo naan unugyada ADF ee Kampala iyo guud ah aan dalka.
Dowladda Jabuuti ayaa markii u horeysay shaacisay in dagaalka Ethiopia uu saameyn xoo gan ku yeeshay dhaqaalaheedii, taasi oo mee sha ka saari karta horumarka dhaqaale ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka socd ay dalkaas.
Wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaaleh oo la hadlay idaacada BBC-da ayaa sheegay in dalki isu uu khasaaray lacag u dhiganta kala bar hanti da qaranka 12-kii bilood ee u dambeeyay.
Jabuuti ayaa 1.7 bilyan oo dollar lumisay ka dib markii uu hoos u dhacay dakhligii iyo shaqo oyinkii dalkaas, kadib markii dagaalka uu sii xu meeyay khal-khal ku yimid silsiladihii sahayda u ahaa ee u dhexeeyay labada wadan.
Dowladda Jabuuti ayaa markii u horeysay la daala dhaceysay saameyntii ka dhalatay cudurka Covid-19, duulaanka Ayaxa iyo isbedelka cimil ada, kuwaasi oo dhaawac gaarsiiyey dhaqaalaha dalkaas.
In ka badan 90% badeecadaha Addis Ababa waxa ay maraan dekedda Jabuuti, taasoo ka soo gasha qarankan lacag u dhaxaysa 1.5 ilaa 2 bily an oo doolar.Dagaalka ka socda gobolka ku yaa lla waqooyiga Itoobiya ee Tigray, saameyn xun kuma yeelan doono mustaqbalka Itoobiya oo kali ah, balse waxaa uu saameyn halis ah ku yaalana yaa dalalka dariska al ah.
Caro xooggan ayaa ka dhalatay kadib markii gabar ka tirsan Aqalka Congress-ka Mareykanka ay Ilhaan Cumar oo sidoo kale xubin ka ah Co ngress-ka ku sheegtay inay qeyb ka tahay wax ay ugu yeertay "Kooxda Jihaa dka.
Lauren Boebert ayaa hadal ka n she egtay intii ay socotay do od ku saa bsan haddii Paul Goasr oo isna xu bin ka ah Co ngress-ka laga qaadayo tal laabo canaan ah kadib markii uu baraha bulshad a soo dhigay muuqaal muujinaya Alexandria Ocasio-Cortez oo iyana ka tirsan Congress-ka la dilayo.
Lauren ayaa tiri "Ilhaan Cumar waa xubin ka mid ah kooxda jihaadka oo ka timid Minnesota, taasi oo walaalkeed guursatay.”
"Xubintan ayaa loo ogolaaday inay ka mid no qoto Guddiga Arrimaha Dibedda ayada oo weliba amaaneysa argagixisada,” ayey tiri Lauren Boeb ert oo lagu tiriyo kooxaha xagjirka ee siyaasadda midigta-fog, taasi oo hadda kahor Ilhaan Cumar ugu yeertay "xubin sharafeed ka tirsan Xamas.”
Lauren Boebert ayaa sidoo kale Eric Swalwell oo isna ah dimoqraadi ka tirsan Congress-ka ku ee deysay inuu la seexday cadowga ayada oo ula je eda xiriir jaceyl oo la sheegay inuu la lahaa gab ar Shiinees ah oo mar dambe la ogaaday inay tahay basaas.
Hadalka Lauren Boebert ayaa waxaa ka dha shay cambaareyn xooggan ayada oo dhowr siy aasi ay ugu yeereen "cunsuriyeyn iyo naceyb.”
Ilhaan Cumar ayaa uga jawaabtay hadallada Lau ren ayada oo tiri "waxaan ku faraxsanahay in la igu soo koriyey si bani’aadaminimo ah oo aan no qon qof caqliga ka maran oo si ceebeysan ugu saxarooda una wasaqeeya Aqalka Wakiilada.”
Ilhaan iyo Rashida Tlaib, oo asal ahaan ah Falas tiini, ayaa ahaa labadii gabdhood ee ugu horree yey ee Muslim ah ee loo doorto Aqalka Wakiilada Mareykanka
Tan iyo markii ay kusoo biireen Congress-ka ayaa waxay la kulmayeen weeraro Islaam nace yb ah oo uga imanaya warbaahinta midigta iyo si yaasiyiinta Jamhuuriga, oo uu ka mid yahay ma daxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Waxay naceybkan inta badan ku muteystaan inay dhaliilaan siyaasadda iyo dhibaatada ay Isa rel ku hayso shacabka Falastiin.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib ga canta ugu dhigtay saddex maxbuus oo loo heesto falal la xiriira argagixisanimo oo Axadii lasoo dhaafay ka baxsa day xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Kamiti ee ku yaalla Nairobi.
Raggan ayaa waxaa xilliga la qabanayey la sheegay in ay doonayeen inay usoo baxsadaan dhinaca Soomaaliya, sida ay shaaciyeen saraak iil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya. Saddexda nin oo uu mid ka mid ah yahay Soo maali ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Maxa med Cali Abiikar, Musharraf Abdalla iyo Joseph Juma.
ka dhex abuurtay dowladda kenya, waxaana ay keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaqada ka eryo taliyihii xabsiyada dalkaasi Wy cliffe Ogallo, wuxuuna u magacaabay taliye cus ub oo la yiraahod John Warioba.
Si kastaba, eedeysanayaasha ayaa haatan loo soo gudbin doonaa magaalada Nairobi ee caasi mada dalka Kenya, si dib loogu celiyo xabsiga.
Madaxweyne Mustafe cagjar "Nasiib darro ci dda jecel inaan xukunka ka tago, oo ay iga ra ysato, in muddo ah inay ii dulqaadato ayay no qonaysaa"
Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaali da Mustafe cagjar, oo habeenkii Habeen hore ahaa jawa abo ka bixinayay su'aalo ay dadku ku waydiin ayeen madasha clubhouse, ayaa ka hadlay arr imo u badan xaaladda guud ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa mar wax laga waydiiyay qaabkii uu ku yimid degaanka ee madaxweynaha looga dhigay, oo la sheegay in dowladda fadar aalku soo magacawday isa ga ee aan degaanka laga soo magacaabin, waxa uu sheegay Madaxweynuhu in xilligaas aysan suurtagal ka dhigi lahayn in degaanka la ga soo magacaabo
madaxweyne, maadaama xaaladdu ay ahayd mid aan degganayn, laguna jiray xaalad deg deg ah, degaankana uusan ka jirin xilligaas baarlamaan iyo xisbi soo magacaa ba Madaxweyne, cid kasta oo xilligaas la keena na fadaraalka umbaa soo magacaabi lahaa waa siduu hadalka u dhigay Madaxweynuhu.
Mar wax laga waydiiyay doorashada iyo in de gaanka ay ka dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah, waxa uu Madaxweynuhu sheegay in degaan ku uu ka tirsan yahay dalka Itoobiya, inta laga ti rsan yahay Itoobiyana uu degaanku la shuruuc noqonayo un Itoobiya, oo aysan wakhti xaadirk an suurtagal ahayn doorasho xor iyo xalaal ah in ay ka dhacdo, waxa uu sidoo kale sheegay in ha ddii uu dalka Itoobiya kala dhaqaaqana, dowlad degaanku wakhtigaas uu qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah.
Mar wax laga waydiiyay inay Madaxweynaha u qorshaysan tahay in dowlad degaanka Sooma alida uu mar helo madaxbanaani isagoo degaan ku uu wato magaca Ogadeniya, waxa uu Mada xweynuhu sheegay in uu ku haminayo in dadka degaanku iyo degaankuba uu yeesho madaxb anaani siyaasadeed, oo dalka Itoobiya wixii deg aanku saami ku leeyahay ee kaga maqan uu ka helo, haddii kalena dadka iyo degaankuba ay noqdaan dal madax banaan oo gooni isutaagga, balse Madaxweynuhu wuxuu carabka ku adkeey ay in magaca Ogadeniya uusan ahayn magac mi daynaya shacabka, fikir ahaana uu kasoo horje edo magacan Ogadeniya waa siduu hadalka u dhigay Madaxweynuhu. Mar wax laga waydiiyay Madaxweyne Mustafe cagjar mudada uu sii joogi doono degaanka ee uu xilka sii hayndoono, waxa uu sheegay in ay san hadda u qorshaysnayn inuu xilka baneeyo, dadka raba inaan xilka baneeyo ayuu yiri ha dulq aataan ilaa intii muddo ah, balse waxa uu shee gay in haddii ay yimaadaan duruuf uu xil uga ta gayo in si sharaf leh uu markaa uga tagayo xilka, isagoo sheegay in wax dhiig ah ku daadan, oo uusan cararayn, diyaaradna lagu qaadayn, waa siduu hadalka u dhigaye.
Mar wax laga waydiiyay dad la sheegay inay de aanka ka qaxayaan oo magaalooyinka kale ee dalka u baxsaday, waxa uu sheegay Mada xweynuhu inuusan ogayn dadkaas, balse lasoo sheego waxay degaanka uga carareen, isagoo xusay in wakhti xaadirkan dowlad degaanka ay joogaan dad shirar ku qabsada magaalada oo ku mucaarada, isla markaana facebook wax ku qora, iyadoo aan cabsi haynin waa siduu hadalka u dhigay Madaxweynuhu.
Mar wax laga waydiiyay dhinaca midnimada, waxa uu Madaxweynuhu sheegay in marka hore ay haboon tahay in midnimada labo lookala qaa do, midnimo shacab iyo midnimo siyaasiyiin, Ma daxweynuhu wuxuu sheegay in la heli karo ama la samayn karo midnimo shacab, balse aan wal igeed la samayn karin midnimo siyaasiyiin.
Dhinaca kale mar wax laga waydiiyay arrim aha deegaamaynta ee badanaa ay isugu dhac aan qabaa'ilku, waxa uu Madaxweyne Mustafe cagjar sheegay in isku dhaca qabaa'ilku ay mar walba dowladdu xaliso, iyadoo geesta kalena aysan degaanka ka jirin wax degaamayn ah laga soo bilaabo wixii is baddalka ka dambeeyay.
Geesta kale mar wax laga waydiiyay bal inuu isu arko isagu inuu kaligii taliye yahay, arrintaasi wuxuu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, wux uuna sheegay in baddalka taas lagu dhaliilo inay xukuumad ahaan ay jilicsan yihiin, waxa kale oo uu sheegay Madaxweynuhu in dadka oo la xiraa aysan ka tarjumaynin kaligii talisnimo, balse qo fkii dambi gala la xirayo, isagoo aan la jirdilaynin, ehelkiisana aan la raadsanayn, waxaa uuna sheegay Madaxweynuhu in is baddal ballaaran uu ka jiro dhanka Xuquuqul insaanka, Xorriyadda iyo nidaamka cadaaladda.
Mar wax laga waydiiyay Gole guurti oo dow lad degaanka laga samaynayo, waxa uu shee gay Madaxweynuhu in hawshaa qorshaheeda la wado, Odayaashii dhaqanka ee degaanka iyo ku wo lagu daray oo caawiya ayuu noqonayaa Gol aha guurtida ee degaanku ayuu yiri Madaxweyne Mustafe cagjar.
Qurbajoogta iyo kaalinta siyaasadeed mar wax laga waydiiyay Madaxweynaha waxa uu she egay, in Qurbajoogtu ay yihiin xoog loo baahan yahay, balse shuruucda dalka Itoobiya ka jirta ee hadda loo baahan yahay in laga gudbo, waxa ka le oo uu sheegay in xukuumad ahaan ay bilaa been in qurbajoogtu ay nidaamka dowliga kusoo galaan qaab lataliye ah, wuxuuna ku booriyay qu rbajoogtu inay qaataan go'aan siyaasadeed oo degaankooda yimaadaan kuna noolaadaan si xor ah. Balse waxa uu Madaxweynuhu sheegay ina ysan marnaba suurtoobayn in qofku uu reerkiisu dibadda degganaado isagiina uu degaanka joo go, oo marba fasax qaato sidaana uu nidaamkii dowliga ahaa ugu jiro, wuxuuna xusay in taa ba ddalkeeda uu fursadda siinayo kuwa degaan kooda deggan kuna nool.
Waa markii u horeysay ee Madaxweyne kasoc da dowlad degaanka Soomaalida uu madal noo can oo kale ah dadku su'aalo ku waydiiyaan, isna uu si waafi ah uga jawaabo, walaw dadkii dib u dhagaystay su'aalihii uu Madaxweynuhu ka ja wa abayay ay ku tilmaameen kuwo aan lagu qancin